Awoodda lagu sii wadi karo - Proton California
Waxaan xirtaa koofiyado badan halkan Protons California, laakiin doorkeyga ugu weyn waa sidii Codeeye Caafimaad. Tan waxaa looga jeedaa waa inaan codeeyo nidaamka iyo xeerarka ogaanshaha iyo inaan hubiyo in wax walba iyo qof walbana ay u hoggaansamaan awaamiirta federaalka. Markii aan leenahay kiis u baahan oggolaansho adag, waxaan galayaa oo si toos ah ula shaqeeyaa bukaanka oo aan ugu doodayaa wakiilkooda shirkada caymiska. Waan ku raaxeystaa qaybtaan ka mid ah kaalinteyda oo waxaan u qaatay si dhab ah.
Waad aragtay, qofna aniga kama oga aniga sida ay muhiimka u tahay in qof geeskaaga ah aad noloshaada u halgameyso. Anigu waxaan ahay badbaaday kansarka naasaha laba jeer.
Markii la i baadhay, waxaan uun is idhi, "Waa maxay hektarku?" Waxaan ahaa orod, fardo fuushanaa, sigaar ma cabbin. Waan yaraa; Hadda uun baan soo jeestay 40. Waxay noqotay mid naxdin leh oo dhaqso u dhacday; Waxaan qabay nooc aad u dagaal badan oo kansar naasaha ah oo si dhakhso leh ula falgalaa. Waxaan lahaa lumpectomy dhamaadka Oktoobar, iyo Isniinta ku xigta Thanksgiving, guud ahaan mastektomi. Looma baahna in la iraahdo, orodkeygii waa sii socday. Nasiib darrose, waxyaaboku markasta si sax ah uma socdaan sidii loo qorsheeyay, laakiin qoyskayga, asxaabtayda wanaagsan, ninkayga iyo dhagax weyn, Richard, Shih Tzu kubbadda yar ee farxadda leh Mr. Snuffy, iyo kaftanka ayaa iga caawiyay sidii aan u dhex mari lahaa, sidoo kale koox gaar ah ayaa ii yeertay. ee haweenka.
Dhammaanteen waxaan joognay bilawdeenii 40-meeyadii, dhammaan Ashkenazi Yuhuud. Haddana, dhammaan bukaannada kansarka naasaha ee la dagaallamaya dagaalka. Aniga iyo saaxiibkay, waxaan gacan ka gaystay helitaanka kooxda taageerada kansarka naasaha ee dumarka loo yaqaan WeSpark, kuwaas oo haweenkan cajiibka ah ay qayb ka ahaayeen. Si deeqsinimo leh oo ay maalgalisay qayb ka mid ah Tom Hanks iyo Steven Spielberg, kooxdu halkaas bay ii joogeen siyaabo aan tiro lahayn. Aniga oo ah xubinta kaliya ee kooxda asalka ah, xusuustooda ayaa ila joogtaa waxayna igu hageysaa sida aan ula dhaqmayo bukaanka iyo xubnaha qoyska ilaa maanta. Waxaan rajeynayaa oo keliya inaan noqon karo mid aan ikhtiyaar u ahayn oo aan u dhiibo bukaannadeenna sida ay haweenkan xoogga weyn oo gaar ah ii ahaayeen.
Safar dheer kadib orod, waan ku faraxsanahay in aan dib u boodo oo sidaas ayaan u saxeexay si aan u ordo 5k. Aniga oo aan socon muddo sanad ah, waxaan go aansaday inaan si gaabis ah ku shaqeeyo oo aan usocdo jidkeyga illaa masaafo dheer. Ma jiraan wax la mid ah tartan si adrenaline-kaaga u soo qulqulaan, dareennada ku hawlan iyo wadne garaaca wadnaha. Farxadda oo dhan, waxaan si indho la’aan ah ula raacay orodyahannada kale iyada oo mid ka mid ah qabanqaabiyeyaasha tartannada uu nagu soo qaaday bas.
Markii albaabbadii basku xidhnaayeen oo ay tartiib tartiib u bilaabmaysay, waxaan isweydiiyay, "Halkee ayuu baskani ina qaadayaa? Waxaan kaliya ordaa 5k?! ” Ama sidaas ayaan u maleeyay. Baskan, ayaan si dhakhso leh u ogaadey, inuu ku waday kuwa orodka marathon badhkooda saf ugu jira. In yar ayaa argagaxday, waxaan ogaaday inaan haysan biyo, cunno fudud oo tamar, iyo sharaabaadyo murugo leh. Mar labaad, waxaan gabi ahaanba diyaar u ahayn waxa nolosha igu kalifay. Laakiin waxaa jiray (macno ahaan) dib uma noqon.
Marka orod marathon badh ayaan sameeyay. Markii aan ordayay, waxaan moodayay naftayda, "Waan joojin karaa, ama waan sii wadan karaa", taasina waa saxda ah waxaan sameeyay. Waan sii waday, sababta oo ah kama aanan bixin inaan dhiibo. Waxaan lahadlay dad xiisa badan inta aan socday. Waxaan akhriyey calaamadaha dhiirrigelinta, midabada leh ee taageerayaasha xamaasadda leh ay hayaan. Waxaan dhegeystay dadkii si farxad leh ugu farxay orodka. Waxaan ku tiirsanaa xusuusta muruqyada. Waana dhamaaday tartankii.
Oo waxaan gartay, mararka qaarkood nolosha inaad ku tiirsato xoog, wax siiso, dad aan kalgacal laheyn si ay kaaga caawiyaan marxaladaha ugu adag, iyo waqtiyada kale ee aad haysato waxa ay kugu qaadaneyso si aad cimilada u dabaysho.